West Brom 0:6 Arsenal | Kabtan Aubameyang Oo Saddexleey Dhaliyay Kulan Gunners Ay Xasuuqday The Baggies – Garsoore Sports
West Brom 0:6…
Saddexleeydii uu dhaliyay kabtan Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ka caawisay Arsenal inay soo dhaweyso guushii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan iyagoo garaacay kooxda West Bromwich Albion si ay u gaaraan wareega saddexaad ee Carabao Cup.
Aubameyang ayaa calaamadeeyay bilawgiisii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan kaddib markii uu laba gool oo taabasho ah dhaliyay qeybtii hore ee kulanka iyo qeybtii labaad oo uu dhaliyay darbo laab ah oo quruxbadanwax yar kaddib nasiinada.
Wuxuu sidoo kale si xarago leh goolkii saddexaad u dhaliyay Nicolas Pepe, Bukayo Saka ayaa isna goosha dhex dhigay goolka afraad ee Gunners.
Alexandre Lacazette ayaa kursiga keydka ka soo kacay si uu isna usii dheereeyo hoggaanka kooxdiisa islamaarkan uu soo natiijada kusoo xiro 0:6.
Guushan ayaa xitaa ka sii weynaan lahayd sida ay hadda tahay, iyadoo Martin Odegaard uu xagal cidhiidhi ah ku garaacay birta, Pepe ayaa isna birta garaacay kaddib markii uu kubbad ka kor qaaday goolhayaha West Brom.
West Brom waxay cayaarsiisay lix ciyaartooy oo kulamadooda ugu horree kooxda, shan ka mid ahi waxay ahaayeen da’yar, laakiin waxay muujiyeen dhabar adeyg ilaa dhammaadka xilli ay wajahayeen habeen aad u adag.
Ugu dambeyntiina, in kastoo, Arsenal ay ahayd kooxda dabaqad ka sarreysay, iyadoo Aubameyang uu u muuqday mid helay tubtiisa goolasha kaddib markii uu kasoo kabsaday coronavirus.
Wuxuu ku sigan karay inuu dhaliyo labadiisii gool ee ugu horreeyay, goolkii 1aad wuxuu ahaa mid uu daba galay darbadii Saka ee uu badbaadiyay goolhayaha kahor inta aanu raacin goolkiisii 2aadna si siddaas u dhow ayuu kubbad uu Nicolas Pepe birta ku garaacay laad raaciyay.
tiisa saddexaad ayaase kasii quruxbadneyd.
Aubameyang wuxuu dhaliyay saddexleeydiisa saddexaad ee waayihiisa Gunners.
Pepe iyo Saka ayaa furay xisaabaadkooda xilli ciyaareedka sidoo kale Lacazette, tababaraha Gunners Mikel Arteta ayaa aad ugu rajo weyn inuu wajaho Manchester City Premier League isbuuca soo socda wuxuuna ugu yaraan doonayaa inaan laga adkaan kooxdiisa.